ဘို (မိုးကုတ်) - တရားစီရင်ရေးလား မတရားစီရင်ရေးလား? - MoeMaKa Media
Home / Bo (Moe Goke) / Community / Coup / Experience / ဘို (မိုးကုတ်) - တရားစီရင်ရေးလား မတရားစီရင်ရေးလား?
Bo (Moe Goke), Community, Coup, Experience
မိတ်ဆွေတယောက်က ဒီနေ့တင်လိုက်တာ အရေးပါတယ်လို့ထင် ဆက်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
သူ​ထောက်ပြလိုက်တာက ဝန်ထမ်းမှန်သမျှ CDM လုပ်ကြဆိုတဲ့အထဲမှာ မပါသေးတဲ့ တရားရေးဌာနကလူတွေဟာ ဝန်ထမ်းမဟုတ် လုပ်စရာမလိုလို့ ဆိုလိုတာလား မေးထားပါတယ်။
ကျနော်က သူတင်ပြတာတွေကို အချက်အလက်အရရော အနှစ်သာရအရပါ ထောက်ခံ အမှန်ကိုတွေး ဆွေးနွေးချင်တာပါ။၊
တိုင်းပြည်တခုမှာ မဏ္ဍိုင် (၃) ခု ချ အုပ်ချုပ်ကြရပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊(Administrative Branch) ဥပဒေပြုရေး (Legislative Branch) တရားစီရင်ရေး(Judiciary Branch) ဆိုပီး တသီးတခြားစီထား ကဏ္ဍများဟာ လွတ်လပ်စွာနဲ့ သူ့အလုပ်ကိုယ့်အလုပ် ခွဲခြားပီးလုပ်ကြ ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့အပေါ် ကျော်ခွင့်မရှိ တိတိကျကျ လုပ်ကြရပါတယ်။
စစ်မိစ္ဆာတွေကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ၂၀၀၈ ခြေဥအရလုပ်ခဲ့သမျှ အစိုးရမရှိ၊ လွှတ်တော်မရှိ၊ တရား စီရင်ရေးမရှိ ပကတိ မင်းမဲ့စရိုက် ကြိုက်တာကိုလုပ် မကြိုက်တာကိုဖြုတ် ထင်သလိုလုပ်တဲ့ အကြွင်းမဲ့အာ ဏာရှင် (Totalitarianism)သာကျန် အမှန်အတိုင်း သိကြပါတယ်။
ပြောချင်တာက ၂၀၀၈ ခြေဥလဲဖျက် သူတို့ကိုခန်ခဲ့တဲ့သမ္မတကိုထောင်ထဲသွင်း မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ကထီးထီးကျန်ရစ်နေကြ ၊ CDM ကလဲမလုပ်၊ ကိုယ့်ဥစ္စာလဲမဟုတ်တဲ့ စစ်မိစ္ဆာယုတ်တွေရဲ့ ရုပ်သေး တရားစီရင်ရေးဌာနဆိုတာ ရှင်းလှပါတယ်။ ဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာ အဓမ္မဘက်ကလိုက်ပီး တရားသူကြီးနဲ့ ရှေ့နေတွေလုပ် အမိန့်တွေ စာချွန်တွေထုတ်ထား မတရားမှန်းသိရက်နဲ့ မပြောရဲ တဖက်သပ်စွပ်စွဲချက်တွေကို အမှန်လုပ် မဟုတ်တဲ့ပုဒ်မတွေနဲ့ စီရင်ချက်တွေချလုပ်နေကြတာများ တရားစီရင်ရေးလား မတရားစီရင်ရေးလား လက်တွေ့ကျကျစဥ်းစားကြဖို့ လိုပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းတာလက်မခံနိုင်လို့ စစ်ဖိနပ်အောက် မရောက်ချင်လို့ တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ လူငယ်တွေ သေဒဏ်ကျခံစေရမယ်ဆိုတဲ့ စစ်မိစ္ဆာတွေရဲ့အမိန့်ဟာ တရားမဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်ကြောင်း တခွန်းမှ မဝေဘန် မထောက်ပြရဲတာ တရားရေးဌာနတဲ့လား? မတရားမှုမှန်ရင်ဆန့်ကျင်ကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံ ခြွင်းချက်တွေကျန်မကျန် အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း အရှိကိုအရှိအတိုင်းသိမြင်ကြ။ သိကြရင်လဲ ပြင်ဆင်ရဲမှ သဘာဝကျမယ်။
ခင်ဗျားတို့က အကြမ်းဖက်စစ်မိစ္ဆာတွေလို့ခေါ်တဲ့ သူတို့ကအမြဲပြောနေကြ ဥပဒေအရလုပ်ရတာပါတို့၊ ကျနော်တို့မှာ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ အတိအကျ ရှိရုံသာမက အားလုံးက လေးစားစွာလိုက်နာ ရိုသေစွာနဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ သာဓကတွေ သက်သေနဲ့တကွ ရှိနေကြပါတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာတွေက ထောက်ခံပေးရာရောက်နေကြလား စဥ်းစားသုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ လိုမယ်။
မတရားစီရင်ရေးကို တရားစီရင်ရေးလိုလို မမျှတတာတွေကို တကယ်ဘဲမျှတနေသလိုလို ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်က သူတို့မတရားရုံးတွေထဲ လျှောက်လဲဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြ ခါးတောင်းကြိုက်က တခြား၊ ဖင်ကတခြား ဆိုသလို ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို တကယ်ဆန့်ကျင် ပြင်ဆင်ကြရမှာလဲ သဲကွဲရေရာ သေချာသမှုမပြု​ကြရင် ထင်သာထင်၊ မဝင်ဘူးကျောင်းအမရေလို့ဖြစ်ကြမှာစိုး တိုးတိုးလေးပြောလိုက်မိ၊ လွန်တာရှိရင် ဝန်တာမိပါလို့။
တယောက်တည်းကိုယ်စား လေးစားစွာဖြင့် ...
ဘို (မိုးကုတ်) - တရားစီရင်ရေးလား မတရားစီရင်ရေးလား? Reviewed by MoeMaKa on 6:29 AM Rating: 5